'Ibali laseHorry laseMelika: Roanoke' Phinda ubuye kwakhona 6 × 05: I-Mott ebumnyameni | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'Ibali laseMelika laseHorror: Roanoke' Phinda ubuye kwakhona 6 × 05: I-Mott ebumnyameni
'Ibali laseMelika laseHorror: Roanoke' Phinda ubuye kwakhona 6 × 05: I-Mott ebumnyameni
U-Evan Peters njengo-Edward Philippe Mott Ibali laseMelika laseHoror: IRoanoke .I-FX
Roxanne roxanne ndifuna ukuba yindoda yakho
Inqaku lomhleli: Kungabonakala ngathi lixesha elothusayo kum, u-Drew Grant, ukuba ayeke ukuphonononga Ibali laseMelika laseMelika , ndiyibona Umjongi fan oyithandayo UEvan Peters Ngokwenyani ndibonakalisile. Kodwa lo mboniso… andisakwazi. Ke ndinikezela ngolawulo ku-Tom Philip ofaneleke ngaphezulu, kwaye ngamanye amaxesha ndiza kuvela ukongeza iisenti zam ezimbini.
Ewe, yayiqinisekile into.
Ngeendlela ezininzi, eli ibe lelinye lamaxesha onyaka aphantsi Ibali laseMelika laseMelika (engathethi kakhulu, kodwa kunjalo). Inkuthazo yomlinganiswa kulula ukulandela umkhondo. Iibali zamabali, ukuba azicocekanga, emva koko zinolungelelwaniso kwaye zixhumeke kakuhle, kwaye imidlalo ukuza kuthi ga ngoku zonke bezikwinqanaba.
Ngezinye iindlela, oku kuxakekile kwaye kuyothusa kwaye akunangqondo kwaphela, ngakumbi ukuba ndiza kukholwa amarhe e-intanethi malunga nobume bokwenyani beli xesha lonyaka . Ukuba isiqendu sale veki sibonakala sisongele i-My Roanoke Nightmare documentary, ithunyelwe ne-The Butcher, kwaye yaphelisa ubunzima be-Miller, ngokuqinisekileyo kukho imibuzo emininzi eya kwiveki ezayo, Siyazi ukuba kungenxa yokukhonza i-twist enkulu , kwaye uphakamise eli xesha lonyaka (kwaye mhlawumbi olu luhlu ').
Kude kube lelo xesha, nangona kunjalo, besinenye iyure yeRoanoke Nightmare ukuba sijongane nayo, ngeli xesha sikhatshwa ngumbhali-mbali kunye no-Evan Peters. Masifumane i-crackin '.
UDoris Kearns Goodwin uyasikhaba kule veki ngebali likaEdward Phillippe-Mott (othi, sifunda kwimbali yethu eyonwabisayo, ethe-ethe-ethe, ngukhokho kaDandy, i-psycho carnie yexesha le-4), yena ngokwakhe ungumntu othanda i-ART (yonke iminqwazi, ukugcina ukusebenza kukaPeter). Ujika uEdward wazakhela indlu ngo-1789 ukugcina ingqokelela yakhe ebalaseleyo, kunye nesicaka sakhe esithandana nesini. Sifikelele encotsheni AHS , abahlobo bam.
Inqaku loMhleli: Kudala ndilinde u-Evan Peters ukuba abonakalise njengenguqulelo ye-queeny UMalcolm McDowell ? Ngokusemthethweni, unyaka omnye!
Ngokwenyani ndingabhatala ukubona u-Evan Peters esenza le nto kwakhona.
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UDrew Grant (@videodrew) ngoJul 4, 2015 nge-9: 53 pm PDT
U-Yasssss u-Evan Peters ubuyile # AHS6 pic.twitter.com/El5alkRgdC
-I-AmericanHorrorStory (@ltsEvanPeters) Nge-13 ka-Okthobha ka-2016
Awu, ubomi bokubuza iifoto, ukuphefumla kakhulu, kunye nobhedu obhedu benziwe ngeesheshi abukho emakhadini. Ngobunye ubusuku uEdward ufumene ingqokelela yakhe yobugcisa ichithekile yaza yatshatyalaliswa. Uvalela intonga yakhe kwigumbi elingaphantsi de umbulali avume, ebanika iapile ebilisiweyo ukuba babelane ngayo okwangoku. Ndicinga ukuba sibukele ukuzalwa kwepati yeRiphabhlikhi kanye apha.
Ukuvela kukuba ayingobasebenzi abaphazamise imizobo nangona! Yayiyiziporho ezaziweyo! Yinyanga yegazi ngokuhlwanje, yabona, kwaye i-The Butcher ize ukwenza izinto ezimbini: yenza ifreyimu yemizobo yonke egwenxa, kwaye ubulale i-foppish smuglord, kwaye iphume kwizakhelo zonke. Ukuvuswa ebusuku, uMott urhuqelwa ngaphandle ziziporho zeRoanoke kwaye wagcoba ngentonga enkulu, okwangoku kubonakala ngathi yinto yabo yonke. UKathy Bates waphinda wazisebenzisa kakhulu iintetho zakhe zobulungisa. Andikwazi ukulinda umgca wakhe weencwadi zomsindo kule ndawo engaqhelekanga.
NGOKU: ukuvuleka kwethu kubanda kwemizuzu elishumi elinambini kuza esiphelweni kwaye sibuyele kunye nabaseMiller, abathi, hleze silibale, bangqongwe yikholoni yesiporho. Zinikezele kum! benza isijwili uKathy Bates, ezimisele ukungcwalisa umhlaba ngegazi labo ukuze baxolise oothixo abadala, okanye nantoni na. Ufanele ababulale, yile nto.
Oku kulandelayo kukuhle ngamanani-manani asukelisa ngokulandelelana kwendlu, esele yenziwe ngeli xesha langokukufa. Kwakhona ihagu iyakhalaza ibaleke ngaphandle kwesiphumo sokwenyani ngaphandle kokubonisa uyilo lwayo oluvakalayo, kwaye iinduli ze-zombified zibonisa umzuzwana. I-Mott ibonisa ukubuya njengesiporho, ithembisa ngokugcina iMillers ikhuselekile. Bazulazula emahlathini okwexeshana, uPeter ethetha ngendlela yakhe ebalaseleyo yesiNgesi, abakwaMiller benza konke boyika kwaye bedidekile. Yonke le nto ibonakala intle… iqhelekile. Ngapha koko, oku kuhlala malunga nemizuzu elishumi.
Mhlawumbi ulandelelwano olunomdla kakhulu lwesiqendu esidityanisiweyo emva koko, xa isiporho sikaMott sikhokelela abaMiller kwifama yehagu apho babekhe bafumana khona amakhwenkwe amancinci amnandi ancancisa umbele wehagu enkulu (ewe, uya kuwukhumbula lo mfanekiso ). Ujika uFrances Conroy ngoyena mntu uswelekileyo wale ntsapho yase-backwoods. Ugcine u-Elias kwaye umguqula kancinci ukuba ngumntu, ngelixa echaza ngokuziphatha, ubundlobongela, kunye neziporho ezihlasela umhlaba ahlala kuwo. Yi-oasis encinci yentsebenzo eyakhelwe kwi-shitshow iyonke yesiqendu. Sinethemba lokuba uza kubuya, kubonakala ngathi kukudutyulwa okude, kunikwe indlela esongwa ngayo iyure.
Ewe, ngokucacileyo uPolk wenze isivumelwano kunye nabakholoniyali, kwaye wahambisa abakwaMiller kanye kwiThe Butcher. Ngaphandle kwepani yokutya inyama kunye nomlilo wesiporho, ngaba ndilungile? UShelby, Matt, noFlora bayayinyamezela enye intetho ye-Butcher (ngelixa ihagu ibukele, bonwabile ukukhupha umgangatho okwethutyana) kwaye sitsho sifumane i-cameo ekhawulezayo evela kuPriscilla, ongenzi nto. Gee, loo mgca webali awuhambanga ndawo ngokukhawuleza, huh?
UAngela Bassett ubonakalisa kanye ngexesha lokuba abukele intombi yakhe igcadiwe ziziporho, kodwa akufuneki nokuba ayigcine imini. Unyana kaButcher, obonakala ngathi, emva kwamakhulu eminyaka yokubulala okungaphaya kwendalo, udweba umgca ekuphekeni intle entle, abamnyama ebusweni umama wakhe bamrhuqela emlilweni endaweni yoko, bonwaba kakhulu uPriscilla noMott.
AbakwaMiller kunye nabaseleyo bakaHarris 'babalekela kakhulu (uPeter uyayiqengqa le r ngobomi obuthandekayo. Lo mfo uyonwabile) kwi-motel ekufutshane, kwaye… kukuphela komboniso, ndiyaqikelela? UShelby Miller ngokuqinisekileyo uyakholelwa ukuba liphelela apho ibali lakhe.
Inqaku loMhleli: Nangona imbonakalo yayifutshane, uMott wakhawuleza wanyuka waya kwi- # 3 eyona ntsebenzo iphuma ku-Peters kumdlalo, kanye emva koTate noJames Patrick Matshi. Yiza, indlela awayethetha ngayo masiyi rrrrrouge iingono zethu? kunye ne-cockhair emfusa? I-A +++, kufanelekile ukulinda. Ewe akunjalo, kodwa ndiza kuthatha into endinokuyifumana.
Iveki elandelayo izakuba yiyure enkulu kwikamva le Ibali laseMelika laseMelika , kwaye akukho nto ixelwayo ukuba ulindele ntoni. Into malunga nesi sixhobo sokubhala amaxwebhu khange idibanise ukuza kuthi ga ngoku, asikabi nalo ulwazi lokuba yeyiphi eyona nto ijongene nomlinganiswa kaLady Gaga kaWoodland, kwaye into indixelela ukuba uMat noShelby bayazi kancinci kunokuba bevumela. Lindela iimpendulo, okanye ungafumani nanye, kwiiveki ezizayo. Esihogweni, banokulahla yonke into kwaye baqale ixesha elitsha esihogweni sayo. Lo ngumboniso kaRyan Murphy, emva kwayo yonke loo nto.
- LALA KAKUHLE. Umxheli. Ubulungile, ungaqhelekanga, kwaye bekungekho sizathu silungileyo sayo nayiphi na into oyenzileyo. Ukubheja uza kubuya, nangona kunjalo.
- Ngaba ndim kuphela okanye ngaba esi siqendu sasimnyama kakhulu, njengakuqala, andinakukwazi ukwenza into eyenzekayo ngesiqingatha sexesha? Ukuba uza kuseta ibali lakho ebusuku, ehlathini, mhlawumbi ubone indlela yokukhanyisa izinto ngokufanelekileyo?
- ngekhe uthi hayi kulo lonke ixesha lonyaka egxile kusapho lakwaPolk nakubomi babo bentsapho baseMelika. Ibali laseMelika laseMelika : I-Cannibal Hillbillies nabani na?
Inqaku lomhleli: Lihlazo eli binzana ukuba yintoni efileyo ayinakuze ife sele ithathiwe kwindlu Imidlalo yeethrone , kuba isebenza kakuhle ngapha kwe AHS ilungelo lokushishina. Nokuba umlinganiswa ukhutyekisiwe kangakanani, kukho amashumi alithoba eepesenti amathuba okuba bavele njengesiporho, bexakekile bexakene nemixokelelwane yabo de isifungo segazi likaRyan Murphy siculwe sonke.
'Ubhuti Omkhulu' Iveki Yesithandathu Ukuphindaphinda: UJudas Kiss
ULeonard Cohen Uyasishiya, Egqobhoza Ngekhuselo Lenyama
UHelly Nahmad, uMthengisi wezoBugcisa waseNew York ngeTrump Tower Ties, ufumana uxolelo
UTom Ley weDeadspin uthetha kwakhona Ukupakisha iBhlog ye4 / 20
ixesha eliseleyo 2 isiqendu 1 sibuyelela
malini robert downey jr eyenzele imfazwe engapheliyo
Ngaba isiseko se-clinton sivaliwe
thina imfundo vs amanye amazwe
Eyona cream yokuguga